बलियो आयस्रोत भए पनि काल बन्दै यार्सागुम्बा - नेपालबहस
बलियो आयस्रोत भए पनि काल बन्दै यार्सागुम्बा
| १०:३३:५१ मा प्रकाशित
२० जेठ,दार्चुला । यार्सागुम्बा हिमाली क्षेत्रको बलियो आयस्रोत भए पनि अहिले त्यही यार्सागुम्बा हिमाली क्षेत्रका नागरिकका लागि काल बनेर आएको छ । दार्चुलाका हिमाली क्षेत्रका जनताका लागि यार्सागुम्बा आर्थिक स्रोतको मुख्य आधार हो । खेतबारीमा लगाएको अन्नले तीन महिना नपुग्ने ठाउँमा यार्सागुम्बाको स्रोतबाट वर्षभरिको खाद्यान्न जोहो हुन्छ । यो क्रम एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको छ ।
अपिहिमाल गाउँपालिकाका स्थानीयवासी यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि अहिले पाटनमा छन् । जेठ पहिलो साताबाट सङ्कलनमा हिँडेकामध्ये तीन साता नपुग्दै तीन जनाले ज्यान गुमाएका छन् । घरमा खान लगाउन नपुग्ने भएपछि लेकतिर हिँडेकामध्ये दुई महिला र एक पुरुषले अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् । अपिहिमाल–३ काटैका जयमती कार्कीको यही जेठ १७ गते गाउँ नजिकैको मिच्छा वनमा यार्सागुम्बा सङ्कलनका क्रममा भीरबाट लडेर ज्यान गयो । स्थानीयवासी निरुता कार्कीका अनुसार गाउँ नजिकैको यार्सागुम्बा पाइने वनमा जयमती गत जेठ १० गतेमात्रै यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न पाटन गएकी थिइन् ।
घरमा चार छोरी र एक छोरा छन् । यार्सागुम्बाबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने उद्देश्यले लेक गएकी जयमतीको सङ्कलन गर्न गएको एक सातामै ज्यान गयो । अहिले परिवार पूरै शोकमा छ । आर्थिक उपार्जनको लागि गएका अधिकांश गाउँका स्थानीयवासी अहिले निराश बनेर घर फर्किएको निरुताले बताइन् ।
व्यास–१ का योगेश बोहरा यो वर्ष पाटनमा खासै यार्सागुम्बा नपाइने गरेको बताउछन् । “मान्छे आउने जाने क्रम चलेको छ । मौसम पनि राम्रो छैन्”, उनले भने । यो वर्ष कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि अनुमति दिएको छैन । विगतमा अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि अनुमति पत्र दिने गरेको थियो । सोहीअनुसार सङ्कलकहरु लेक जाने गरेका थिए ।
लेक लागेर यार्सागुम्बा नखुल्दै पाटन पुगेका एकको मृत्यु २ महिना पहिले
महामारीबीच यार्सा सङ्कलन गर्न लेकतिर जानेको घुइँचो २ महिना पहिले
अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्रमा यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न अनुमति २ महिना पहिले
काश्मिरका रेल स्टेशनहरुमा निःशुल्क वाइफाइ सेवा १ दिन पहिले
६ वाणिज्य बैंकसहित १३ कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ? २ हप्ता पहिले
चिया उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याइने २ हप्ता पहिले
सिटिजन्सको एसएमई तथा घर कर्जा ९.५०% वार्षिक ब्याजदरमा ११ महिना पहिले
६ सय प्रतिशतले बढ्यो तरकारीको मूल्य ! ११ महिना पहिले
अनमोल केसीकाे ‘क्याप्टेन’ युट्युबमा ६ महिना पहिले
कोरोनाका कारण आर्थिक दृश्य चुनौतीपूर्ण देखियो : अर्थमन्त्री २ महिना पहिले